Umzali oCwangcisiweyo - iProfayili
Imbali kunye neNkcubeko Imbali yabesifazane
Ngokuphathelele Inhlangano Ukubonelela Iinkonzo Zempilo Ezalisayo
Igama elithi "ubuzali obucwangcisiweyo" esetyenziswe ekuqaleni kwimisebenzi yokulawula inani labantwana abazalwa kwintsapho. Umninimzi uMargaret Sanger wakhuthaza ulwazi malunga nendlela yokulawula ukuzalwa njengendlela yokujongana nentlupheko yeentsapho apho abazali abangenakukwazi ukubonelela ngemali kwiintsapho zabo ezikhulayo kwaye bebengakwazi ulwazi lwezesondo kunye nolwazi lwezonyango olunokunciphisa inani labantwana babo.
Mayelana neMibutho Yomzali:
Namhlanje, uMzali oCwangcisiweyo Ubhekiselele kwimibutho kwiindawo zendawo, zombuso, nakwamanye amazwe. I-Federation of Parenthood Federation yaseMelika (PPFA) yiqela le-ambulula kwinqanaba likazwelonke e-United States, kunye namaqumrhu anxulumeneyo kunye ne-International Planned Parenthood Federation (IPPF) esekelwe eLondon ihlanganisa amaqela ehlabathini lonke. I-Focus of Federation Parenthood Federation namhlanje ihlinzeka ngononophelo lwempilo yokuzala, imfundo yesondo, ukululekwa kunye nolwazi; Iinkonzo zokukhipha isisu, ngelixa zininzi iingxabano zeenkqubo zabo, liyingxenye encinci yeenkonzo ezibonelelwe kumaziko angama-800 e-United States.
Umvelaphi we-Federation of Parents Based Federation of America:
Ngomnyaka we-1916, uMargaret Sanger wasungula iklinikhi yolawulo lokuzalwa yokuqala eMelika. Ngomnyaka we-1921, ekuqapheliseni ukuba iimfuno zolwazi kunye neenkonzo zinkulu kunekliniki yakhe, unokuseka i-American Birth Control League, kwaye ngowe-1923, iBhodi yoLwazi lokuLawula iClinial Research Centre.
Ukuqaphela ukuba ulawulo lokuzalwa luyindlela kwaye kungekhona injongo - ucwangciso lweentsapho luyinjongo - iBhodi yoPhando lweeNkcukacha zoLwazi lokuLawula uLwabiwo labizwa ngokuba yi-Planned Parenthood Federation.
Iingxaki eziphambili kwiNkqubo yoBomi boBani:
Umzali oCwangcisiweyo uguqukile ukujongana nemiba eyahlukeneyo kwiinkonzo zokuzala izithatha njengokuba imeko yezopolitiko kunye nomthetho ishintshile.
UMargaret Sanger uvalelwe ngexesha lakhe ngenxa yokuphulwa komthetho weComstock . Ngaphambi kokuba i- Roe v. Isigqibo seNkundla esiphezulu seWade ngokukhipha isisu, iikliniki zazincitshiswa ekunikezeni i-contraceptive kunye nolwazi-kwaye nokuba ezo nkonzo zazincitshiswa ngokwemiqathango. I-Hyde Amendment yenza kube nzima kubafazi abasweleyo ukufumana isisu ngokungafaki iinkonzo ezivela kwiinkonzo zempilo zedolophu, kunye noCwangciso loParenthood bafuna ezinye iindlela zokuncedisa abafazi abahluphekileyo-abaphulaphuli bokuqala bokusebenza kolawulo lokuzalwa ngokuzalwa - ukufumana iinkonzo zempilo ezifunekayo kunye ukulawula ubukhulu beentsapho.
Iminyaka yeReagan neBush:
Ngexesha leminyaka yeReagan, ukuhlaselwa okwandayo malunga nokukhetha kwabafazi okwenziweyo kuthintele ukuBakho koBani. I-Gag Rule, ukuthintela ootitshala bezocwangciso zentsapho ukuba banikele ngolwazi lwezokwelapha malunga nokukhipha isisu, kwenza kube nzima ukubonelela iinkonzo kubasetyhini ngamazwe. Izihlaselo - zombini ngobudlobongela ngabanye, ezikhuthazwa yimibutho yokulwa nokukhipha isisu, kunye nemida yomthetho ngokukhipha isisu nakwezinye iinkonzo zokuzala - iikliniki ezinzima kunye nemibutho echaphazelekayo yomthetho kunye nenxaxheba. Iminyaka yaseBush (bobabini boongameli bakaBush) yayiquka ukunyanzelisa imfundo yokulala ngokwesondo kuphela (nangona kukho ubungqina bokuba imfundo yesondo leyo ayigcini ngokukhawuleza isantya sokukhulelwa okanye ukukhulelwa ngaphambi komtshato) kunye nemida emininzi ekukhethweni kokuzala kuquka nokukhipha isisu.
UMongameli uClinton waphakamisa iGag Rule kodwa uMongameli uGeorge W. Bush ubuyiselwe.
2004 Matshi eWashington:
Ngo-2004, u-Predhood Parenthood wadlala indima ebalulekileyo ekuququzeleleni uhambo olukhethiweyo eWashington, ngoMatshi kuBomi beBasetyhini, olwenziwa ngo-Ephreli 25 waloo nyaka. Ingaphezu kwesigidi esihlangene kwiSizwe seMall kuloo mboniso, kunye nabasetyhini baninzi lwabo babonisa.
I-Federation Based Parenthood Federation idibene nayo:
I-Alan Guttmacher Institute, egxininisa uphando nophuhliso
Isicwangciso-mali se-Action Plan yabazali (PPAF), intlangano eyahlukileyo egxile kwizenzo zomthetho kunye nokucebisa
International Federation of Parenthood Federation
Isikhokelo soBani boBani:
Iiklinikhi zoMzali eziCwangcisiweyo ziqhubeka zijongene neengongelo kunye neziganeko zesoyiko kunye nokuzama ukusongela okanye ukuvimbela abafazi ukuba bangene kulezo klinikhi kunoma ziphi iinkonzo.
Umzali oCwangcisiweyo uphinde usebenzele imfundo epheleleyo yesondo, ukunceda ukukhusela ukukhulelwa ngokusebenzisa ulwazi, ukuchasana neenkqubo zokuzilahla kuphela ezikhuselekileyo ukukhusela ukukhulelwa. Ulungelelaniso lobuzali bobuzali bokufumaneka kwezilwanyana zomthetho okanye izixhobo zomthetho, ukufikelela kwiinkonzo zokukhipha isisu, kunye nokuphelisa iimfuno zokucima izicwangciso kwiingcali zonyango ezithintele ukuba zinike ulwazi lwezogulana kwizigulane zabo.
Abo bachasene nokufumaneka kokukhupha isisu okanye iinkonzo zokubeletha bayaqhubeka bechonga i-Planned Parenthood kwimigudu yokuxhatshazwa, ukuzama ukuvala iikliniki ngokucwangcisa kunye nokuqhankqalaza kunye nezinye iindlela. Abo baxhasa ubundlobongela njengendlela yokuchasa ukhetho lokuzala, bayaqhubeka nokujolise kuBucala boBani.
Umzali oCwangcisiweyo kunye neNdawo ehambelana nayo kwiWebhu
Umxholo woBani boBani
IsiCwangciso soKwenziwa koMzali esiCwangcisiweyo
UJohn Salvi, iClinikhi yokuKhulelwa kweZilaphulo, kunye neCawa yamaColombia
Umzali oCwangcisiweyo Udlala iKhadi "loGonyamelo"
I-NARAL Pro-Choice yaseMerika
Ulungelelaniso lweNkolo loKhetho lokuzalana
U-Adrienne Ucebile: Umfazi weSizwe kunye nePolitiki
Imibutho ephezulu yamakhosikazi kuma-1970
Ngowe-1970 u-Feminism Isihlandlo
Iphrofayili yeNhlangano kaZwelonke yabaseTyhini (MANJE)
Ngubani Owesifazana Wokuqala Otyunjwa ukuba abe nguMongameli?
Sebenzisa iMephu yeConcept for Your Literature Midterms and Finals
Amagosa okuGcina iziGodi zeGalati Ukulinganisa kwiZiko loBuhlaza
Abo Bakhathazekayo KwiTendinitis Bangasebenzisa Ezi Zingcebiso Zokuncedisa Ubuhlungu
Iprofayile yeCorvette: 1966 Corvette
I-Arkansas State University Admissions
Inkcazo ye-Alpha Radiation
IWilberforce University Admissions
IzeNzululwazi ichaza ukuba kutheni ulahla ubukhulu bamanzi
UJohn Alfred Prestwich (JAP) IiInjini
IBhayibhile yeBhayibhile kwi-Character Character
Ukubhala Ixesha kwiSpanish
Ukubuyela esikolweni ngesimo esihle
I-Rhetoric: Iinkcazo kunye nokuqwalasela
UJohn Lloyd Stephens noFrederick Catherwood
Guru: uMfundisi woMoya wamaHindu
Imibuzo yoMculo weTesha
I-Polyurethane Iyasetyenziswa njani kwiiState zeSiteyini?
'Kwaye iZiqithi zavuma' nguKhaled Hosseini
I-Ancientism yama-Greekism - Isingeniso
Izibalo zeeNyuvesi zeBhanki zeBrown